TTSweet: အမည်သညာ ခေါ်ပုံကား
Posted by T T Sweet at 12:41 PM
Ma Ma Sweet, it is very lovely yet funny post, which makes me laugh and apparently makes my day, thank you!!!
သက်ဝေ September 29, 2011 at 12:57 PM
မိတ်ဆွေ လင်မယား နှစ်ယောက်ကတော့ သားအကြီးလေးမွေးတော့ ဖိုးချိုလို့ အိမ်မှာ ချစ်စနိုးခေါ်ကြတယ်... ဒီတော့ တယောက်ကို တယောက် စကားပြောရင် ထုံးစံအတိုင်း ဖိုးချိုတို့ အဖေ ဖိုးချိုတို့ အမေလို့ ပြောကြ ခေါ်ကြတာပေါ့... နောက်နည်းနည်းကြာတော့ သမီးလေးတယောက်ထပ်မွေးတယ်... သမီးလေးကို ဆွေဆွေလို့ နာမည်ပေးတယ်...။
ဒါပေမယ့် သူတို့ နှုတ်ကျိုးနေတာက ဖိုးချိုတို့ အဖေ ဖိုးချိုတို့ အမေ ပဲလေ... ကြာလာတော့ သမီးက မခံနိုင်တော့ဘူး... အဖေတို့ အမေတို့က တခါလာလဲ ဖိုးချိုတို့ အဖေ၊ တခါလာလည်း ဖိုးချိုတို့ အမေ ဆိုတော့ ဆွေဆွေ့ အဖေနဲ့ ဆွေဆွေ့ အဖေက ဘယ်မှာလဲ လို့ ပြန်မေးလိုက်သတဲ့...း)
Vista September 29, 2011 at 1:30 PM
ကျနော့် အဘွားက အဖိုးကို ကျော်ကျော်ရေလို့ ခေါ်သတဲ့ သူ့ ထက် ၁၁ နှစ်ကြီးတာကို ။ အဘိုးက ချစ်နေတာ အဲလိုခေါ်တာ နောက် အမေတို့ကလေးတွေကပါ ကျော်ကျော်ရေ လိုက်လုပ်တော့ အဖေကြီးရေလို့ ပြောင်းပြလိုက်တယ်။ဟိဟိ။
AH September 29, 2011 at 2:44 PM
ရယ်ရတယ်အမရေ.... နိစဓူဝ ဆိုတော့လည်း ဖြစ်တော့ ဖြစ်တတ်သား :)
susu September 29, 2011 at 3:19 PM
TZH1985 September 29, 2011 at 3:58 PM
ဒါနဲ့ မသန်းစိန်ဆိုလို့ ရွာက အရင် တစ်ယောက်တည်းတော ဆရာဝန် နာမည်က ကိုသန်းစိန်တဲ့ဗျ :D
တောင်ငူသား September 29, 2011 at 4:09 PM
ကြီးတော်ကြီးလင်မယားကတော့ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်
သူ့ဖေရေ သူ့မေရေ တဲ့။
ုမြသွေးနီ September 29, 2011 at 7:02 PM
အဖေရေ...အမေရေ လို့ ခေါ်တာတွေက မြသွေးလည်း ခနခနဖြစ်ဘူးတယ်။ ကြာလာတော့ အဖေက သိနေပြီ။ “ ဘယ်အဖေ” ကိုခေါ်လဲဆို မေးတတ်လာပြီ။ :)
တူမတစ်ယောက်ဆို ၁၉နှစ်ရှိနေပြီ။ ချောချောလေး။ ငယ်ငယ်က လုံးလုံးပုပုလေးမို့ လုံးပုလို့ ခေါ်မိတာ။ အခုတော့ သွယ်ချောဖြောင့်လို့။ လုံးပုခေါ်မိရင် စိတ်တွေဆိုးနေပြီ။
ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတာလေးတွေကို ရိုးရိုးလေးရေးထားတာ သဘောကျမိတယ်...။
Sweet wroteaso sweet post:)It'sasymbol of"Thein gara"stream.
ကြည်မြန်မာ September 30, 2011 at 1:10 AM
ဟား ဟား..။ မစံပယ်တို့အမေကလည်း သိပ်ရိုးတာ..။ သူများတွေနဲ့စကားပြောရင် ကျူပ်တို့အိမ်ကလေ ကျူပ်တို့အိမ်ကလေ လို့ပြောသံကြားဘူးတယ်..။ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်က နောက်တတ်တယ်..။ ဆရာမကြီး အိမ်ကဘယ်ဟာကြီးပြောနေတာလဲလို့နောက်တာ..။ အဖေတစ်နေရာသွားနေလို့နောက်ကလိုက်ခေါ်ရင် ဘေးကတစ်ယောက်ယောက်ကို ကျူပ်တို့အိမ်ကဟာ ပြောစမ်းပါ့တော်လို့ တိုက်ရိုက်မခေါ်ဘဲ ဘေးလူကိုပြောခိုင်းတတ်တယ်..။ လူကြားထဲသူတို့ခေါ်ရမယ်ဆိုရင် အမေတော်တော်ဒုက္ခရောက်တာ တွေ့ရတယ်..။ ရည်းစားတွေသိမ်းထားတာ ခိုးဖတ်ဘူးတာတော့ အမေက အဖေ့ကို "ကို" လို့သုံးတာ တွေ့ဘူးတာပဲ..။ နောက်တော့ ဖအေ ဖအေ လို့သုံးတယ်..။ အဖေကလည်း မိန်းမ မိန်းမလို့ ခေါ်တာကြားဘူးတာပဲ..။ချစ်ပြီးကြိုက်ပြီးယူလာကြတာ ကြည်နူးဖို့ကောင်းပါတယ်..။ ခုတော့ အဖေကဆုံးသွားပြီ..။ အမေ့ကိုသနားလို့ မဆုံးဘူး.. မစံပယ်မှာလေ..။
San San Htun September 30, 2011 at 12:07 PM
ဟဝှါတို့ အမေ တီတီဆွိ..း)
အပြုံးပန်း October 1, 2011 at 1:23 PM
ပြုံးမိတယ်၊ ပြီးတော့ ရယ်မိတယ် သဘောကျလို့။
အမေရေ အရမ်းရယ်ရတယ်။ တကယ်ပဲ ဟာသညဏ်ရှိပါပေတယ်။ တချို့ဘလောက်တွေဆို ငါ့ကောင်းကြောင်းငါရေးတယ် စိုသလိုမျိုးရေးဟန်က ဖြစ်နေတာ။
အမ ဘလောက်က တကယ်ဖတ်လို့ကောင်းတယ်။ သိစရာလေးတွေသိရ။ ရယ်လဲရယ်ရ။ စလုံးတုန်းက မတွေ့လိုက်တာ နာတာပဲ